Wararkii ugu dambeeyay Afar sarkaal oo booliska faransiiska ah ee lagu dilay Paris | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Afar sarkaal oo booliska faransiiska ah ee lagu dilay...
Wararkii ugu dambeeyay Afar sarkaal oo booliska faransiiska ah ee lagu dilay Paris
Paris (Halqaran.com) – Waxaa maanta weerar mindi ah lagu dilay Afar sarkaal oo boolis Faransiis, wuxuuna falkan ka dhacay gudaha xarunta booliska magaalada Paris, sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan Midowga Booliska.
Sarkaalka oo lagu magacaabo Loic Travers, ayaa sheegay in sarkaal kale oo boolis ah uu toogasho ku dilay qofkii weerarka soo qaaday.
Travers ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaaday la rumeysan yahay inuu shaqaale ka ahaa xarunta booliska, hase yeeshee aan weli si rasmi ah loo xaqiijin.
Travers waxa uu sheegay in weerarku u muuqday inuu ka billaabmay gudaha xafiis, kadibna uu ku baahay qeybo kale oo ka mid ah dhismaha.
Duqa magaalada Paris Anne Hidalgo ayaa xaqiijisay in “dhowr qof” lagu dilay weerarka.
Weli ma cadda sababta hoggaamisay weerarka oo ka dhacay bartamaha Paris, meel u dhow kaniisadda caanka ah Notre-Dame Cathedral.
Si kastaba, Travers ayaa sheegay in qofka la tuhusan yahay inuu weerarka geystay uusan marnaba wax dhibaato ah horey uga gaysan shaqada.
Duqa magaalada Paris Anne Hidalgo